Trump oo madaxweynaha Ruushka ka difaacay eedo loo soo jeediyey - BBC News Somali
Trump oo madaxweynaha Ruushka ka difaacay eedo loo soo jeediyey
Image caption Trump maalmahan wuxu joogay qasrigiisa Mar-a-Lago ee Florida ku yaal
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, oo wax laga waydiiyey ayaa ka difaacay Vladimir Putin eedo loo soo jeediyey oo ah in dowladda Ruushku fuliso hawl gallo dad lagu khaarajiyo.
Waraysi uu siiyey Telefishanka Fox News ayuu ku yidhi "dad badan oo wax laayaa jira. Dilaa badan baa jira. Maxay kula tahay? Dalkeenu waxaa ma ka beri baa?
Trump ayaa sheegay inuu ixtiraam u hayo madaxweyne Putin oo uu danaynayo in "ay aad isku fahmaan".
Wuxu sheegay inuu doonayo in uu Ruushka ka helo taakulayn ah la dagaalanka "argagixisada Islaamka ah".
Hadallo googoos ah oo la sii daayey ka hor intii aan la baahin waraysiga uu siiyey Bill O'Reilly oo dhamaystiran , ayaa muujinayey in lagu qaaday guriga Trump ee Florida ku yaal.
Mar wax laga weydiiyey in uu tixgalin u hayo Putin iyo in kale, madaxweynaha Maraykanku wuxu ku jawaabay "waan ixtiraamaa…dad badan baan ixtiraamaa. Taa macnaheedu ma aha in aan wax kasta ku raacsanahay isaga".
Waxaanu intaa ku daray "waxan leeyahay way fiican tahay in aan is fahamno Ruushka oo aanaan isa seegin. Hadii Ruushku inaga caawinayo la dagaalanka ISIS [Daacish] oo ah dagaal wayn iyo argagaxisada Islaamka ee dunida oo dhan, arrintaasi waa mid fiican. Waana wax isku kaaya soo dhawany kara aniga iyo isaga? In kasta oo aanan hadda waxba ka ogayn inaan isla jaan qaadi doono iyo in kale."
Trump waxa kale oo la waydiiyey bal in uu masuuliyad darro ahaa iyo in kale hadalkii uu ku andacooday ee ahaa in malaayiin qof si sharci darro ah codkooda uga dhiibteen doorashadii Maraykanka ee uu isagu ku guulaystay maadaama oo aanu wax caddayn ah u haynin, waxaanu ku jawaabay oo yidhi "dad badan baa hadlay oo sheegay in aan saxnaa, midhkaa waad ogtahay adiguba. Markaad aragto dad bilaa sharci ah, dad aan wadanka u dhalan oo hadana ku jira diiwaanka cod bixiyeyaasha …… way caddahay in dad bilaa sharci ahi codeeyeen, qaar dhintay baa xataa codeeyey….. waa arrin runtii aad u xun."